Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ
1 www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 9th November 2009, 9:36 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-26
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 3
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 25
Ning.com ဟာ အချိန်တိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတင် ning.com နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Social Network တွေတော်တော်လေးများများတွေ့ရပါတယ်။
ning search မှာ Myanmar လို့ရိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် ၂၀၀ ကျော်တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းထဲမပါတဲ့ Network တွေလဲအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီ Topic မှာ Ning.com network နဲ့ပတ်သက်တာတွေမေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေကြားပေးပါ့မယ်။( ကိုယ်ကလဲ Ning ပဲသိတာကိုး [You must be registered and logged in to see this image.] )
Ning ရဲ့ CSS ကို Trick လုပ်နည်းတွေ၊ Script ထည့်နည်းတွေ နဲ့ အခြားသိချင်တာတွေမေးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကျနော့်ရဲ့ Network ကိုလေ့လာကြည့်ပါဦး။
2 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 18th November 2009, 10:31 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 7
တညျနရော : ပုသိမ်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-04
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 9
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ မသိရင် တမုန်းကိုမေးမှာပါ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
3 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 8th December 2009, 3:10 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-08
Cryptonyte wrote: Ning.com ဟာ အချိန်တိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတင် ning.com နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Social Network တွေတော်တော်လေးများများတွေ့ရပါတယ်။
Last edited by Хакер-истребитель on 8th December 2009, 5:38 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : quote ပိုနေသော့ကြောင့်ဖျက်လိုက်သည်)
4 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 8th December 2009, 9:11 pm
network and internet မှ [You must be registered and logged in to see this link.] သို့ ပြောင်းလိုက်ပါသည်။
၈.၁၂.၀၉ : ၁၀း၃၆ pm
5 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 25th January 2010, 1:54 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 24
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-23
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 31
script နည်းလေးကိုမစပေးပါလား။ကို cryptoryte :gp
6 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 25th January 2010, 2:02 pm
ဘယ် script ကို ထည့်ချင်လို့လည်း ခင်ဗျာ။
Analytics ဆိုတာ Google Analytics ကို ပြောတာလားမသိ
7 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 25th January 2010, 6:27 pm
mg hack wrote: script နည်းလေးကိုမစပေးပါလား။ကို cryptoryte :gp
ဒါမျိုးလေးတွေပါ။။ flash ထည့်ချင်ပါတယ်။။Analytics က Manage က And more အောက်က ဟာပါ။။။
မေးစရာတွေအများကြီးပါ နည်းနည်းစီမေးပါ့မယ်။။။ :gp
8 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 27th January 2010, 9:33 am
မရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပေးပါ့မယ်။။အရင်ဦးဆုံး [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုသွားပါ။
(အဲလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ တယောက်ယောက်ရဲ့ ning.com မှာ Create Ning Network ကိုကလစ်လိုက်ပါ။)
ဖော်ပြပါပုံအတိုင်းဖြည့်စွက်ပြီးရင်ကိုယ်ကmemberတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ ပြီးရင်sign upဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ
9 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 27th January 2010, 9:38 am
ကိုယ်မထည့်ချင်တဲ့featureတွေကိုdrag here to remove featureဆိုတဲ့အထဲကို
ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါပြီ။မတွေ့လို့တင်လိုက်တာပါ။သိပြီးရင်တော့ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 30th January 2010, 10:53 am
source ထဲမှာပြင်ချင်ရင်ဘယ်လိုသွားလဲမသိဘူး။source ထဲကိုရောက်အောင်။။ပြောပြနော် :thinkagain
11 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 30th January 2010, 12:01 pm
mg hack wrote: ဘယ်သူမှလည်းမေ၇းကြပါလား။ကိုCryptonyteလည်းဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။သိတဲ့လူပြောပြပါဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ ကိုမောင်ဟတ် .. Cryptonyte က ဒီဖိုရမ်ကို မ၀င်ဖြစ်လို့ဗျ .. အဲတော့ အကိုပြောတွေ မဖြေပေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ် ..
ဘယ်လို Source ကို ပြင်ချင်တာလဲ မသိဘူးဗျ .. သေချာလေး ပြောစေချင်ပါတယ် ... ဒီဖိုရမ်မှာလည်း Ning Creator တွေ ရှိပါတယ် ..
အပေါ်က မောင် $ƴǩǾ လို ဆရာတွေ မေးလည်း ရတယ် ...
12 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 31st January 2010, 10:52 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 97
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-02
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 123
mg hack wrote: source ထဲမှာပြင်ချင်ရင်ဘယ်လိုသွားလဲမသိဘူး။source ထဲကိုရောက်အောင်။။ပြောပြနော် :thinkagain
ဘယ် source ကို ပြင်ချင်တာလဲဗျ။ CSS?
13 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 31st January 2010, 1:03 pm
အင်းဗျာ ပြောတာလောသွားတယ်။ဆောရီး :thinkagain
တကယ်ပြောချင်တာက Analyitics ထဲကဟာတွေကိုကလိချင်လို့ဗျ.ပြီးတော့ဗျာ ကို skyko တို့ ဒီဆိုဒ်ကိုဟက်ကာစောက်ရှုးတစ်ကောင်ကသတိပေးတဲ့ post ကိုဖက်ရတယ်ဗျ။ဒီ page ကို click ပြီး view page source
ကိုကြည့်ရင် ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဗျ src="http://illiweb.com/fa/js_16/en.js"ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျအဲဒီကနေဖောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာကြားဘူးတယ်။ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတာတော့ အကိုတို့သိမှာပါ။မဟုက်၇င်လည်း ဆောရီးပါ :thinkagain
14 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 3rd February 2010, 4:55 pm
15 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 5th February 2010, 4:15 pm
လင်းထက် wrote: နိုင်ငံရေးဘာလို့ပေးမရေးတာလဲအဲံ့ဒါကြီးက
16 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 9th March 2010, 1:11 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 10
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-08
Ning.com မှာ mouse cursor ကို မြန်မာလို follow ဖြစ်နေတာလေးလုပ်ချင်လို့ပါ...ဖြေပေးကြပါဦး...
17 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 11th March 2010, 6:07 pm
cursor ကတော့အကိုလုပ်ချင်တဲ့ ကုတ်ကိုယူပြီး apperance ကနေ advance မှာသွားထည့်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေသွားမှာပါ
18 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 12th March 2010, 7:21 am
mg hack wrote: cursor ကတော့အကိုလုပ်ချင်တဲ့ ကုတ်ကိုယူပြီး apperance ကနေ advance မှာသွားထည့်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေသွားမှာပါ
အခုလိုဖြေပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော်လိုချင်တာက analyze မှာထည့်ရမဲ့... .js နဲ့ရေးထားတာလေးကိုလိုချင်တာပါ...
19 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 12th March 2010, 12:48 pm
Here For you bro,
var beghtml='<font color="#fff"><b>';
You can edit Welcome to another text that you want to display.
20 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 13th March 2010, 9:24 am
αℓт.332 wrote: Here For you bro,
ကျေးဇူးပါအကို...အဲဒီကုဒ်က မြန်မာလိုမပေါ်ဘူးခင်ဗျာ..အဲဒီကောင်လုပ်တာကရပါတယ်...ကျွန်တော်သိချင်တာက မြန်မာလို လုပ်ထားတာလေးပါ...အဲဒီဆိုဒ်ကိုလည်း ကျွန်တော်မေ့နေလို့...
မြန်မာစာ font က ????? တွေပဲပေါ်လို့...ကုဒ်တခုခုလိုနေလို့ပါ...ဘာလိုနေမှန်းတော့မသိပါဘူးဗျာ....
21 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 13th March 2010, 9:28 am
အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျ.... ကျွန်တော့် site လေးမှာစမ်းကြည့်တာတော့ မြန်မာလိုပေါ်တယ်..ဒါပေမယ့် အသတ်တွေ မပေါ်ဘူး
22 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 13th March 2010, 8:13 pm
ကျွန်တော်ဆိုက်ထဲမှာ link အကို တို.ဆိုက်တွေရဲ. link လေး ဖော်ပြချင်ပါတယ် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြ ပါနော်
23 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 13th March 2010, 8:26 pm
Text box တစ်ခုယူပြီးတော့ Link ထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ်အစ်ကို... Marquee တွေဘာတွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့
24 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ on 8th August 2010, 3:31 pm
နိုင်းကတော့ လောဘကြီးပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေပြီ
25 Re: www.ning.com နဲ့ပတ်သက်သမျှ